Ngabe i-Angiovit iyasiza ukukhulelwa? Imiyalo yokusebenzisa > Ukwelashwa nokuvimbela
Ungayithatha kanjani i-Angiovit lapho uhlela ukukhulelwa
Sanibonani kubo bonke abafundi abanelukuluku!
Abashadikazi abaningi banamuhla bayakuqonda ukubaluleka kokuhlelelwa kokukhulelwa. Ngaphambi kokukhulelwa, baqala ukuvakashela udokotela, bahlolwe ezikhethekile futhi babonane nochwepheshe. Lokhu kuyadingeka ukuze uthole imiyalo ephathelene nezidakamizwa ezizosiza ukukhipha ingane ngempumelelo futhi inciphise noma iyiphi i-pathologies ngesikhathi sokukhulelwa kwayo.
Njengomthetho, ezimweni ezinjalo, imvamisa odokotela banquma izakhiwo zamaminerali nezevithamini. Okunye okuthandwa kakhulu yimiyalo ye-Angiovit yokuyisebenzisa lapho uhlela ukukhulelwa, okuzohlaziywa kulesi sihloko, okuzosiza ukufunda kabanzi ngomuthi kanye nomphumela wawo.
Izici ze-Angiovitis: izakhi zomuthi kanye nosizo lwazo ekukhulelweni
Umuthi "i-Angiovit" unqunywe kulezo zimo lapho kushoda khona amavithamini e-B emzimbeni womuntu noma owesifazane. Yithinta ngokuqondile le mqondo ophumelelayo, kanye nokukhula nokwakheka kwengane esibelethweni.
Ukwakheka kwale nkimbinkimbi inhlanganisela yamavithamini B12, B6 ne-B9 afakwe ne-glucose. Ngisho nokudla ukudla okugcwele kulezi zinto, umzimba ngeke ukwazi ukuthola imithamo edingekayo. Ngeke zanele umcabango ophumelelayo.
Kulokhu, i-gynecologist ingancoma ukuthatha amavithamini e-B ngendlela yethebhulethi. Ukuze wandise amathuba okuphumelela kokukhulelwa kweqanda, udokotela angayalela indoda i-Angiovit.
Ngenxa yokwakheka ngokulinganayo kwamathebhulethi, asiza ukwenza kusebenze i-amino acid methionine futhi anciphise inani le-homocysteine, elibangela ukuthuthukiswa kwezindawo ezicindezelayo:
isifo sokuqina kwemizwa,
Izifo zemithambo yegazi nenhliziyo,
Ukhuphula izinga laso kungaholela ezinkingeni zokukhulelwa nokukhula kwe-fetus pathologies esibelethweni.
Izinkomba ezisetshenziswayo: lapho kusebenza khona i-Angiovit?
Umuthi wabesifazane unqunywa ezimweni lapho udokotela ethola isiguli ngezinga eliphakeme ngokweqile le-amino acid Homocysteine. Ukubuyekezwa ku-Intanethi kuqinisekisa ubungozi bokuthola i-pathology enjalo, ngoba kuholela ekuqothulweni kwama-capillaries we-placenta. Labo abakhulelwa bananzelela ukusebenza kwe-AngioVit njengesidakamizwa sokukhulelwa okuphephile futhi okuphumelelayo kwengane.
Yingakho umuthi ubekelwe imibhangqwana ehlela ukuba nengane:
ukuvikela nokuphatha ukwelashwa kwe-Vitamin,
uma unesifo sikashukela esithuthukile kumama,
nge-anemia kanye nokunciphisa amathuba okukhula kwayo,
ukuvimbela kanye nokwelashwa kwe-pathologies yehliziyo,
ngezinkinga ngohlelo lokujikeleza kwemithambo yegazi,
uma kunengozi yokwanda kwamazinga we-homocysteine,
ngaphambi kwe-IVF ukuthuthukisa ukuhamba kwegazi.
Kwabesilisa, umuthi ubekelwe ukukhulisa ijubane nekhwalithi yesidoda.
Imiyalo yokusebenzisa i-Angiovit: umthamo, ubude besikhathi, okungahle kwenzeke
Iphakheji i-Angiovit N60 evela kumenzi waseRussia i-Altayvitaminy ifaka izingcezu ezingama-60 zamacwecwe angenalutho ngaphandle kombala, ngalinye liqukethe u-4 mg we-Vitamin B 6.5 mg we-folic acid no-6 μg we-vitamin B12. Ukusetshenziswa kwomuthi kungahluka ezigulini ezihlukile, ngoba imithetho yokwamukelwa isuselwa kuphela ezimeni zesiguli ngasinye.
Uma sikhuluma ngohlelo lwama-classical, imiyalo yokusebenzisa i-Angiovit imi ngalendlela elandelayo:
phuza ithebhulethi elilodwa ngosuku nsuku zonke ngenyanga eyodwa,
ungaphuza umuthi nganoma yisiphi isikhathi, noma ngabe ungadla ini,
iphilisi alinakuchotshozwa ngaphambi kokuthatha noma ukuhlafuna, liphuzwa liphelele futhi ligezwa phansi ngengilazi yamanzi ahlanziwe.
Mangaki amaphilisi okufanele uwaphuze ngosuku akhonjiswa udokotela kuphela ngemuva kokuhlola isiguli nokwenza uchungechunge lwezivivinyo. Ngakho-ke, esimweni sokuhlonza izinga eliphakeme le-homocysteine, udokotela angakunikeza amaphilisi ama-2 ngosuku. Isikhathi sokuphatha singase futhi sehluke - kusuka ezinsukwini ezingama-20 kuya ezinyangeni ezimbalwa.
Uma owesifazane ophethe ingane enenani eliphakeme le-homocysteine, ukwelashwa kungaqhubeka kulo lonke i-trimester eyi-1. Lapho ebuzwa kangaki ngonyaka ukuphinda inkambo yokuthatha i-Angiovit ukuze ibe nomphumela, kodwa kungalimazi impilo, odokotela baphendula ngokulandelayo: amahlandla ambalwa kungakapheli unyaka owodwa ungalungiselela ngokuphephile uvithamini ukuze uvundise ngempumelelo.
I-Angiovit yabesilisa: ingabe kuyadingeka ngesikhathi sokuhlelwa kwengane?
Kubalulekile ukuthi ungabi ngowesifazane kuphela, kodwa nowesilisa uqinise impilo yakhe ngaphambi kokukhulelwa. Isithangami sokukhulelwa siqukethe imininingwane eminingi ngokusebenza kwe-Angiovit kohlelo lokuzala lwabalingani.
Ukwakheka kwalo muthi kuqukethe i-folic acid, evimbela ubuthi besidoda. Ngakho-ke, ngokuntuleka kwale vithamini, amaseli wesilisa wesilisa angakhiqizwa ngaphandle komsila noma ikhanda.
Umuthi we-vithamini ulwa nale nkinga, uqinisekise ukukhiqizwa kwesidoda esinempilo nesisebenzayo, esandisa amathuba okuqamba.
I-Contraindication kanye nemiphumela emibi: kungaba khona ukulimala okuvela kulungiswa kwe-vitamin Angiovit?
Umuthi uvame ukubekezelelwa kahle futhi ezimweni ezingandile ubangela noma yikuphi ukusabela okungekuhle. Imvamisa lokhu kwenzeka ngenxa yokufunda okwanele kwemiyalo, ngoba kukhombisa ukuthi umuthi wenqatshelwe ukuthatha lapho kukhona ukungezwani nezinto zawo.
Uma kwenzeka kusetshenziswa i-overdose, imiphumela emibi ingavela, efana:
Kulokhu, kudingekile impela ukubona udokotela ozokuhambela ozosiza ekukhetheni izidakamizwa eziphumelela neziphephile zomuthi.
Ekhemisi ungathenga okunye esikhundleni se-Angiovit.
Intengo yale mishanguzo iyahlukahluka ngobubanzi obuningi, okuzovumela iziguli ezinemali ehlukile yokuhola ukuthi zikhethe umuthi. Imibhangqwana engakakulungeli ukwandisa imindeni yayo, kuzosiza ukuzijwayela ngenkulumo yamahhala ethi "I-21st Century - Azikho Izidakamizwa ZeHormonal!" Ezivela ku-dokotela wezingane u-Irina Zhgareva.
I-Angiovit isiza ukukhulelwa futhi ngasikhathi sinye ivikele ubungozi bokukhula kwama-pathologies ahlukahlukene enqubo yokukhulelwa nokuzala umntwana. Kunoma ikuphi, ukuze ukhulelwe, kunconywa ukuthi uqale uhlole nodokotela wakho ngesimo sakho sempilo.
Ukubonisana nokuhlolwa kusigaba esibaluleke kakhulu esisendleleni eya ephusheni lengane. Kuyadingeka futhi ukuthatha izivivinyo ezifanele ukuthola ukuthi kwenzakalani ngomzimba wonke kanye namasosha omzimba ikakhulukazi. Le ndatshana ewusizo kufanele inconyelwe ukuthi ifundelwe abangane bakho, futhi ungakhohlwa ukuphindaphinda ezinkundleni zokuxhumana.
Nakekela impilo yakho, hlela ukukhulelwa kwakho kusengaphambili futhi ungadingi umuthi. Ngizojabulela ukufunda imibono nezimpendulo ezivela kumfundi ngamunye. Impilo kuwo wonke umuntu nakuwo wonke umuntu, size siphinde sihlangane ezihlokweni ezilandelayo!
Ozithobayo, uKatherine Grimova, umama wendodakazi enhle!
Yini i-Angiovit nokwakhiwa kwayo
I-Angiovit ilungiselelo elihlanganisiwe le-vithamini, equkethe umthamo omkhulu wamavithamini we-B, osetshenziselwa ukukhula okuphelele nokukhula kwengane.
Ukwakheka kwe-Angiovit kufaka phakathi:
kunciphisa ukungaphatheki kahle, kunciphisa isicanucanu ku-toxicosis, kuthuthukisa ukuhlanganiswa kwe-amino acid (funda i-athikili ehlobene: I-Toxicosis ekukhulelweni kokuqala >>>),
into ebaluleke kakhulu ekuhleleni ukukhulelwa. Kuyadingeka kubo bobabili abazali, kuvimbela ukwenzeka kokungalungi kokuzalwa kwengane (ekukhuleni okujwayelekile kwengane, bheka isihloko esithi Ukuthuthukiswa kwengane esibelethweni >>>),
IVithamini B12, esebenza ukuvikela i-hemoglobin ephansi futhi ivikele nezinkinga ngohlelo oluphambili lwezinzwa.
Ake sibheke ukuthi kungani kuchazwa i-Angiovit lapho uhlela ukukhulelwa.
I-Angiovit ichazwa ngesikhathi sokuhlela kumacala alandelayo:
ukuvikela ukushoda kwe-vithamini,
engcupheni yokuthuthukisa amazinga aphezulu we-homocestein,
uma emlandweni usengozini,
ukuze kunciphise amathuba okukhula kwe-anemia kumama,
I-Angiovit nayo ibekelwe abesilisa lapho behlela ukukhulelwa ukuze bandise ijubane nekhwalithi yesidoda. Lesi isici esibalulekile sokuqonda okuphumelelayo, kepha sizokhuluma ngalokhu ngezansi.
Ungayithatha kanjani i-Angiovit
Ufuna ukwazi ukuthi ungayithatha kanjani i-Angiovit lapho uhlela?
Isikhathi sokuphatha nesikimu sincike esimweni sempilo sesiguli.
Kubalulekile! Uma i-homocysteine ​​esegazini akuyona into ejwayelekile futhi kunezifo ze-vascular kanye nezinkinga zenhliziyo, khona-ke lesi sidakamizwa simane nje siyadingeka kuwe.
I-Angiovit inemiyalo elandelayo esetshenziswayo:
Imvamisa thatha ithebhulethi engu-1 ngosuku, kungakhathalekile isikhathi sosuku noma sokudla, senyanga,
Uma ukuhlaziya kukhombisa ukuthi kukhona i-homocestein ephezulu egazini, udokotela uzokuyalela ukuthi uthathe lesi sidakamizwa kabili ngosuku, i-1 i-tablet,
Ithebhulethi kufanele ihlanjululwe ngamanzi amaningi, ayinakuhlafunwa, ichotshozwe futhi ihlutshulwe.
Imiyalo yokusetshenziswa isebenza kubo bobabili ababambisene.
Imvamisa, uvithamini E ubekwa kanye ne-angiovitis.
Le nto, evimbela ukwakheka kwezigaba zegazi emithanjeni yegazi, ikhulisa ukugeleza kwegazi, ivimbele ukuvela kwezifo ezinhlobonhlobo ezithweni, ibandakanyeka ekwakhekeni kwe-placenta.
Ngabe ama-Angiovit Ayawadinga Amadoda?
Ungaphuza i-angiitis endodeni lapho uhlela ukukhulelwa.
Le yinkimbinkimbi eyakha amavithamini engeke ithinte isidoda kabi, kodwa futhi engenakusebenza isimangaliso futhi iphilise izinkinga ngesidoda, uma sikhona.
Khumbula! Lokhu kumisethi yamavithamini ongawathola ekudleni okujwayelekile, uma ulungisa indlela odla ngayo.
Kepha kumuntu kulula kakhulu ukudla iphilisi ekuseni bese uzola wena nempilo yakho.
Njengomphumela wokuthatha amaphilisi e-Angiovit endodeni:
amandla onke azokhuphuka,
ikhwalithi yesidoda iyathuthuka
uhlelo lwezinzwa luzoqina ngokwengeziwe
ukumelana nomzimba kuzoqina.
Ubaba wesikhathi esizayo, njengonina, olungiselela ukukhulelwa, kufanele ahlolwe ukuze akhombe ubukhona bezifo ezifihliwe futhi azelaphe ngesikhathi.
Lo muthi akufanele uwuthathwe uma ungasebenzi ngamavithamini. Ukungezwani okunjalo kubonakaliswa ukulunywa kwesikhumba, futhi mhlawumbe ngesimo esibi kakhulu, ngendlela ye-angioedema. Funda kabanzi mayelana nokukhubazeka kokukhulelwa >>>
I-Angiovit ivame ukubekezelelwa kahle, kepha imiphumela emibi emibi ingahle ivele ngesikhathi sokuphatha:
kuzoba nokuzwela okwengeziwe kwesikhumba,
isicanucanu, ukuthamba, ukuhlanza kanye ukushaya kwenhliziyo.
Kulokhu, udinga ukuyeka ukuthatha i-Angiovitis futhi utshele udokotela ngakho.
Naka! Uma uphuza i-ovithamini eyinkimbinkimbi ngokungalawuleki, ungadala i-hypervitaminosis!
Izibonakalisa ngezimpawu ezilandelayo:
I-Hypervitaminosis B6 ibangela ukuqina kwamalunga, kuphakamise namakhono amahle wezandla zezandla,
Ukweqisa kwe-folic acid ngesikhathi sokukhulelwa kubangela i-asthma enganeni,
I-B12 eningi iholela ku-vascular thrombosis, ibangela i-pulmonary edema, futhi ingahle iholele ekuqhekekeni kwe-anaphylactic.
Kubalulekile! I-overdose yamavithamini we-B yenzeka kuphela uma ungalandeli imiyalelo yokusetshenziswa. Ngakho-ke, ngenkathi uthatha i-Angiovit, kufanele ulandele ngokusobala yonke imithetho.
Ngemuva kokuhoxiswa kwe-Angitovit, yonke imiphumela emibi ihamba futhi ayidingi ukwelashwa okwengeziwe.
Uma ufuna ingane yakho ukuba ibe nempilo, khona-ke nakanjani udinga ukuthatha ukuhlela ngokungathi sína.
Ezinyangeni ezintathu ngaphambi komqondo ohleliwe, ngaphandle kokuthatha izinto eziwusizo, kuyadingeka ukuholela impilo enempilo,
Ungaphuzi ikhofi eqinile ,,
kubalulekile ukungafaki utshwala nokubhema,
Kungcono ukusebenzisa izithelo nemifino eminingi, uthathe izivivinyo zokutheleleka (funda i-athikili: Ukuhlolwa kokuhlela ukukhulelwa >>>), uyohlolwa ngokuphelele.
Umuthi "i-Angiovit" uyinkimbinkimbi yamavithamini, enezakhi ezintathu ezibalulekile: i-Vitamin B12 (i-cyanocobalamin), i-vithamini B6 (ibizwa nge-pyridoxine kwezokwelapha), kanye ne-Vitamin B9, okungukuthi i-folic acid eyaziwa yiwo wonke umuntu. Isidakamizwa esinjalo sikhiqizwa ngesimo samathebhulethi ahlanganisiwe.
Kungani kuchazwa i-Angiovit lapho kulungiselelwe ukukhulelwa?
Lapho uhlela ukukhulelwa, i-Angiovit imvama ukubekelwa ukuvimbela ukusweleka kwezakhi ezakha umuthi, okungukuthi, amavithamini we-B. Futhi izinto ezinjalo zibaluleke kakhulu kulungiselelo lokukhulelwa.
Izikhombisi-ndlela eziphambili zomphumela wesidakamizwa emzimbeni wowesifazane, ikakhulukazi, umama okhulelwe:
Amavithamini e-B asiza ukwenziwa ngokwezifiso ukusebenza kohlelo lwezinzwa, olubaluleke kakhulu esigabeni sokukhulelwa.
Izakhi zomuthi zisiza ukugwema ukwanda kwezinga le-homocysteine ​​egazini. Lokhu, okokuqala, kungaphazamisa ukuhamba kwe-fetoplacental, futhi okwesibili, kungangena kwi-placenta futhi kube nomphumela onobuthi ku-fetus. Okwesithathu, i-homocysteine ​​ingakhuphula ukukhukhula kwegazi, futhi lokhu kusongela ukwakheka kwezigaba zegazi.
Amavithamini e-B athatha ingxenye ebonakalayo kuzo zonke izinqubo ze-metabolic, kanye nasekwakheni izicubu ezintsha, kubandakanya nezitho ezibalulekile ze-fetus. Futhi uma kukhona ukushoda kwabo, lokhu kungaholela kokunye ukungahambi kahle kwe-fetus, futhi okunzima kakhulu.
Izakhi zokwakhiwa zithuthukisa ukusebenza kwesistimu yenhliziyo, yenza kube lula isigqi senhliziyo futhi kuqiniswe i-myocardium.
Amavithamini e-B, phakathi kokunye, asiza ukunciphisa ukubonakaliswa kwe-toxicosis, okubangela ukungakhululeki ezigidini zomama abakhulelwe.
I-Vitamin B12 ibandakanyeka ekuhlanganiseni kwe-hemoglobin, okuthi njengoba wazi, ihlinzeka nge-oxygen satellite yegazi nokuhanjiswa kwayo kuwo wonke amasistimu nezitho zomzimba. Ngokushoda kwe-cyanocobalamin, ubungozi bokukhula kwe-anemia banda kakhulu, futhi buyingozi kakhulu ngesikhathi sokukhulelwa.
Ngakho-ke, i- "Angiovit" esiteji sokulungiselela ukukhulelwa igwema ukukhula kwe-anemia noma i-hyperhomocysteinemia (amazinga andayo we-Homocysteine), futhi inciphise nengozi yezinkinga ezinzima ngesikhathi sokukhulelwa, njengokukhubazeka kwengane noma i-hypoxia ye-fetus. Ngaphezu kwalokho, umuthi unqunyelwe kulabo besifazane abanomlando wokuphuphuma kwezisu noma ukuzalwa ngaphambi kwesikhathi, abanesifo senhliziyo noma i-anemia.
Imvamisa, esigabeni sokulungiselela ukukhulelwa, abesifazane banikezwa ithebhulethi elilodwa ngosuku. Ngaphezu kwalokho, ukwamukelwa akuxhomeki ekusetshenzisweni kokudla, ngakho-ke uyakwazi ukukukwenza kokubili ngesikhathi sokudla, nangaphambi noma nangemva kwalokho. Isikhathi sosuku naso singaba yisiphi, futhi kulula kakhulu. Isikhathi senkambo yokwelashwa sikhethwa ngawodwana, kepha imvamisa cishe siyizinsuku ezingamashumi amabili kuya kwamashumi amathathu.
Izincomo ezimbalwa zabesifazane abahlela ukukhulelwa:
Lapho uhlela ukukhulelwa, umuthi "i-Angiovit" ungathathwa hhayi ngowesifazane kuphela, kepha futhi ungaba ubaba wesikhathi esizayo, okuwukuthi, indoda. Ithuluzi likuvumela ukuthi uthuthukise ikhwalithi yesidoda, okungukuthi ukukhulisa ukusebenza kanye nomsebenzi wesidoda.
Ukuthatha i-Angiovit yodwa akunconywa, noma lesi sidakamizwa siphephile futhi singabhekelwa ukuba singomama abakhulelwe nabancelayo.Noma kunjalo, kufanelekile ukuqala ukuvimbela ngemuva kokubonisana nodokotela nokuncoma kwakhe. Futhi, uchwepheshe kufanele enze irejimeni yokwelashwa, ebheka isimo sowesifazane nezinkinga zakhe zempilo.
Uma ngesikhathi sekwemukelwa uphawule ukuvela kwezimpawu ezingemnandi, bese utshela udokotela wakho ngokushesha okukhulu. Mhlawumbe umuthi awukufanele, futhi kulokhu uzokhanselwa.
Musa ukweqa imithamo ekhonjisiwe, ngoba okweqile kwama-vithamini B emzimbeni kuyingozi futhi, nokushoda kwawo.
Kungcono ukuqala ukwamukela esisekelweni sokulungiselela ukukhulelwa, kepha kungaqhubeka ngesikhathi sokukhulelwa uma udokotela ekubona kudingekile (ngokwesibonelo, ngokuba ne-anemia kakhulu, i-hyperhomocysteinemia, izifo zenhliziyo, ukuntuleka okukhulu kwamavithamini we-B).
Kuhlala kuphela ukwengeza ukuthi i-Angiovit ilusizo kakhulu esigabeni sokuhlela ukukhulelwa, futhi kwesinye isikhathi kuyadingeka nje. Ngakho-ke, uma udokotela ekuqokele lo muthi, vele uqale ngokuwuthatha ukuze uthuthukise impilo, futhi wehlise nezingozi zokuthi ube nezinkinga esiteji sokukhulelwa.
I-Angiovit lapho uhlela ukukhulelwa: yini edingekayo nokuthi isebenza kanjani
Umkhiqizo unokwakheka okulinganiswe ngokuphelele ngezenzo eziqondisiwe. Ngakho-ke, kungcono ukuqala ukuthatha kuphela ngemuva kokuqokwa okufanele kwezokwelapha. Ubani uvithamini?
Abesifazane abanenkinga yamavithamini afakwe eqenjini B. Uma ukhulelwa umntwana onenkinga yalawa mavithamini emzimbeni, i-pathology ye-fetus ngisho nokukhula kwezifo zenhliziyo ayikhishwa.
Abesifazane abakhulelwe abanamazinga aphezulu e-homocysteine ​​egazini. Uma kunokuningi kwako, ukopha ku-placenta kuzobe kungalungile, futhi lokhu kusongela kakhulu i-fetus.
Abamele "iqembu eliyingozi". Kufaka nabesifazane abanolwazi lokukhulelwa okuyinkimbinkimbi. Futhi kuleli qembu kufaka phakathi omama abakhulelwe abanezihlobo zabo okutholakale ukuthi banesifo sokuqaqamba kokuqala, imivimbo, ukushaya kwenhliziyo.
Abesifazane abadinga inkambo yokuzivikela ukuvikela izifo zenhliziyo.
Kwabesilisa - uma imiphumela yocwaningo lwesidoda ingakhombanga umphumela omuhle kakhulu, futhi ikhwalithi yabo idinga ukuphuculwa.
Uma uzenzela ukuntuleka kwamavithamini ngesikhathi, ungazivikela kunqwaba yezingozi. Isibonelo, ngokuntuleka kwamavithamini, izingane zikhula ziba buthakathaka, ngamalambu angokwengqondo nangokomzimba.
Isisekelo sokuqanjwa kwamavithamini B6, B9 no-B12. Banomphumela oqondile emzimbeni womama abakhulelwe, bandisa amathuba okuqhamuka kwengqondo okuphumelelayo kanye nokuzala okuthule ngaphandle kokuthuthukiswa kwe-pathologies.
Udokotela uzonquma i-Angiovit lapho ehlela ukukhulelwa ngemuva kokuthola imiphumela yokuxilonga - ikakhulukazi, kufanele azi umphumela wokuhlaziywa ukuthola inani le-homocysteine ​​egazini.
Imithetho yokwamukelwa nemiphumela emibi
Ukuthatha umuthi kulula kakhulu: udokotela uzokweluleka uhlelo olunemininingwane. Esimweni esibi ngokweqile, uzoncoma ukulandela imiyalo, eqondakalayo ngokwanele futhi engabangeli imibuzo. Imithetho ejwayelekile yokuthatha i-multivitamin:
kumthamo ojwayelekile - 1 ithebhulethi ngosuku,
akukho mingcele ekudleni kokudla - ukwamukela kutholakala nganoma yisiphi isikhathi,
ungaphuza iphilisi ngesikhathi esifanele - kusukela ekuseni kuze kuhlwe,
isifundo sithatha izinsuku ezingama-20 kuye kwengama-30: udokotela uzoncoma isikhathi sonke.
Ngenqubo yokwamukelwa, ungadinga ukuvakasha okuningana okungeziwe kudokotela ukubheka isimo. Ngokusekelwe kulokhu, udokotela angaguqula umthamo noma anwebise inkambo. Kubalulekile futhi ukubonana nodokotela uma kuvela ukuvela okungalindelekile noma okungahambi kahle.
I-Multivitamin ine-contraindication eyodwa ekuthatheni - ukungahambisani nokwakheka. Futhi noma kunjalo, kuneziguli ezimbalwa kakhulu ezinqatshiwe. Uma umthamo wephulwa noma kuvela ezinye izinkinga, kuzovela imiphumela emibi elandelayo: i-urticaria, ikhanda kanye nesiyezi kuzokwenzeka, isikhumba sizwakale kakhulu, ukulala kuzophazamiseka. Isicanucanu esinokwenzeka, ukuthokomala, ukuhlanza.
I-multivitamin Angiovit ephumelelayo lapho uhlela ukukhulelwa kufanele uthathwe ukuze kuthuthukiswe izinqubo eziningi zangaphakathi futhi uvikele ezingozini. Into esemqoka ukuthi udokotela unquma umuthi futhi uqaphe ukusebenza kwawo njalo.